Qodobada laga soo saaray kulankii dhexmaray Madaxweyne Biixi iyo Raysal-wasaare Abiy | Berberanews.com
Home WARARKA Qodobada laga soo saaray kulankii dhexmaray Madaxweyne Biixi iyo Raysal-wasaare Abiy
Qodobada laga soo saaray kulankii dhexmaray Madaxweyne Biixi iyo Raysal-wasaare Abiy
Addis Ababa(Berberanews)- Ra’isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed Cali ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wefti uu hoggaaminayo. Weftiga madaxweynaha waxa madaarka ku qaabilay wasiirka maaliyadda Itoobiya Mudane Axmed Shide iyo wasiirru-dawlaha arrimaha dibadda Hirut Zemene waxaana loo qaabilay si diirran.
Qoraal kooban oo xafiiska ra’isal wasaare Abiy Axmed baahiyay ayaa lagu sheegay in labada hoggaamiye isku raaceen arrimo dhawr ah oo qaarkood heshiisyo laga gaadhay. Arrimaha la lafaguray waxa ka mid ah; xoojinta xidhiidhka labada bulsho, sii xoojinta iskaashiga dhank ammaanka iyo dhaqaalaha.
Sida lagu sheegay qoraalka xafiiska waxa uu madaxweyne Biixi madaxa u ruxay dalab uga yimid Dr Abiy Axmed oo ku saabsan in la wanaajiyo xidhiidhka Somaliland iyo xukuumadda Soomaaliya laakiin, lama sheegin in labada dhinac dhexdhexaadin ama wada hadal laga dhex bilaabayo.
Waxa kale oo qoraalka lagu sheegay in madaxweyne Biixi iyo Dr Abiy isla eegeen arrimo la xidhiidha ka faa’iidaysiga dekedaha Somaliland laakiin, dawladda Itoobiya ayaa weli dhammaystirin heshiiskii lagu siiyay saami dhan 19% oo ay dekedda Berbera ku yeelato sida uu dhawaan sheegay wasiir Sacad Cali Shire.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo qaarka mid ah wasiirradiisa oo bogagooda baraha bulshada si kooban ugaga hadlay socdaalkooda ayaa sheegay in laga wada hadlay xoojinta xidhiidhka Somaliland iyo Itoobiya iyo arrimo la xidhiidha danaha ay wadaagaan labada dal ee dhanka dhaqaalaha iyo ammaanka.
Geesta kale madaxtooyada Somaliland iyo tan Soomaaliya ayaa beeniyay in uu jiray kulan la qorsheeyay in uu dhexmaro madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Farmaajo. Warbaahinta Soomaalida iyo tan Itoobiya ayaa si weyn u baahiyay in uu qorshaysan yahay kulan Addis Ababa ku dhexmaraya labada hoggaamiye laakiin, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku laabtay Muqdisho waxaana jira warar sheegaya in kulankaasi la hindisay laakiin, aan lagu heshiin sidaasna uu ku baaqday.
Socdaalka Madaxweynaha Somaliland ee Addis Ababa waa markii u horaysay tan iyo markii uu horaantii sanadkii hore talada Itoobiya qabtay ra’isal wasaare Abiy Axmed. Bilihii la soo dhaafay madaxweynaha Soomaaliya Mr Farmaajo ayaa sheegay in uu Soomaaliya ka moosay faro gelin ay ku haysay Itoobiya taas oo loo arkayay in uu ula jeeday Somaliland laakiin, socdaalkan kediska ah ayaa loo arka mid la xidhiidha xiisadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya.
Cali Warancadde oo ka mid ah siyaasiyiinta Somaliland ee ruug caddaaga ah ayaa ku taliyay in Kenya citiraafto Somaliland xilligan waana arrintaas tan loo arko in ay dedejisay kulanka Dr Abiy iyo Biixi. Dadka siyaasadda Odorosa ayaa aamminsan in madaxweyne Farmaajo iyo Dr Abiy Axmed ka cabsadeen in Kenya kor u qaado diblamaasiyadda Somaliland sidaasna uu ku qasmo isbedelka gobolka ee uu wado Dr Abiy oo loo arkayay in Somaliland iyo Jabuuti uu gadoon geliyay waxaana xusid mudan in madaxweyne Farmaajo socdaal kedis ah ku tagay Jabuuti kaas oo uu shalay galinkii dambe ka laabtay.
Previous article“Ma jirto dowlad aan ku wareejineyno taako ka mid ah dhulka ay Kenya leedahay”Monica Juma
Next articleXildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Somalia oo Muqdisho lagu dilay